nepal grameen bikas bank(nepal grameen bikas bank) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
nepal grameen bikas bank
इतिहास बन्यो ग्रामीण विकास बैंक !
काठमाण्डौ । नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लिमीटेड बिहीबारदेखि इतिहास बनेको छ । लामो समयदेखि लघुवित्त संस्थाको रुपमा काम गर्दै आएको यो कम्पनीको नाम फेरिएको हो । अब यो कम्पनी ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडको रुपमा अस्तित्वमा रहनेछ । यही नामबाट बिहीबारदेखि यो कम्पनीको कारोबार हुने नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)ले जनाएको छ...
ग्रामीण विकास बैंकको तेश्रो साधारणसभाः मर्जरपछि अवस्था मजबुत बन्दै गएको निश्कर्ष
काठमाण्डौ । नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लिमीटेडको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा पुस २८ गते शुक्रबारका दिन रुपन्देही व्यापार संघको सभाहल, बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको सभाले सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, वासलात, नाफानोक्सान हिसाव, नगद...
ग्रामीण बैंकको बिक्री नभएको संस्थापक सेयर पुनः लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य १०० रुपैयाँले घट्यो
काठमाण्डौ । निर्धन उत्थान बैंक लिमीटेडको स्वामित्वमा रहेको नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लिमीटेडको संस्थापक सेयर बिक्री नभएपछि मूल्य घटाएर पुनः लिलामीको प्रक्रिया खुलाइएको छ। यसअघि निर्धन उत्थानले कात्तिक २० देखि मंसिर ६ गतेसम्म ग्रामीण विकास बैंकको १ लाख ९१ हजार ९ सय ९२ कित्ता संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता न्यूनतम ३०० रुपैयाँ मूल्य तोकी...
ग्रामीण बैंकको एफपीओ असोज ३१ गते बाँडफाँड हुने, तपाईलाई कति पर्ला ?
काठमाण्डौ । नेपाल ग्रामीण विकास बैंकको बहुचर्चित एफपीओको बाँडफाँड आगामी असोज ३१ गते हुने भएको छ । एफपीओ निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम गरिरहेको प्रभूू क्यापिटलका एक अधिकारीले असोज ३१ ग्ते कमलादिस्थित प्रभूू क्यापिटल परिसरमा एफपीओको बाँडफाँड हुने जानकारी दिए। क्यापिटलले बाँडफाँडको सबै पूर्व तयारी सकिसकेको छ । बाँडफाँडको...
ग्रामीण बैंकको एफपीओ पाउन भाग्यकै भर !
काठमाण्डौ । नेपाल ग्रामीण विकास बैंकको एफपीओ पनि अब भाग्यमानीहरुलाई मात्र पर्ने भएको छ । यो कम्पनीले आइपीओकै मूल्यमा निश्कासन गरेको एफपीओमा अचाक्ली आवेदन परेको छ। यो कम्पनीले भदौ २७ देखि ३० गतेसम्म खुलाएको ९ लाख ७५ हजार कित्ता एफपीओमा थामिनसक्नु आवेदन परेको हो । एफपीओ निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम गरिरहेको प्रभू क्यापिटलका...
आइपीओको मूल्यमा एफपीओ हत्याउन तँछाडमछाड, तेश्रो दिनसम्म १.६ अर्बको आवेदन !
काठमाण्डौ । बित्तीय रुपमा स्वस्थ कम्पनीको एफपीओ आइपीओकै मूल्यमा हत्याउने सपना कसको पो नहोला र ? तर, सबैको सपना पूरा हुँदैन । यही संकेत बहुुचर्चित नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लिमीटेडको आइपीओमा तेश्रो दिनसम्म परेको आवेदनमा समेत देखिएको छ । यो कम्पनीले १ सय रुपैयाँ अंकित दरमै निश्कासन गरेको ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको एफपीओमा भदौ २९ गते...
ग्रामीण बैंकको एफपीओमा अचाक्ली भीड, दोश्रो दिनमै ८२ करोडको आवेदन
काठमाण्डौ । बहुुचर्चित नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लिमीटेडले आइपीओकै मूल्यमा खुलाएको एफपीओमा दोश्रो दिन बुधबारसम्म ८२ करोड ३० लाख बढीको प्रस्ताव परेको छ । भदौ २७ देखि खुलेको एकसय रुपैयाँ दरको कुल ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको एफपीओमा पहिलो दिन मंगलबार ३० करोड २५ लाख बढीको आवेदन परेकोमा दोश्रो दिनसम्म ८२ करोड ३० लाख बढीको परेको बिक्री...
काठमाण्डौ । बहुुचर्चित नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लिमीटेडले आइपीओकै मूल्यमा खुलाएको एफपीओमा पहिलो दिन नै ३ गुणाको हाराहारीमा आवेदन परेको छ । भदौ २७ देखि खुलेको एकसय रुपैयाँ दरको कुल ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको एफपीओमा पहिलो दिन ३० करोड २५ लाख बढीको आवेदन परेको बिक्री प्रबन्धक प्रभूू क्यापिटल लिमीटेडले जनाएको छ । देशभरको आस्वा...
आजदेखि आइपीओकै मूल्यमा एफपीओ, रु. ५ हजार भए पुग्ने !
काठमाण्डौ । सोमबारसम्म दोश्रो बजारमा प्रतिकित्ता ७१३ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल ग्रामीण विकास बैंकले आज(भदौ २७) देखि साधारण सेयरको अतिरिक्त निश्कासन(एफपीओ) गर्दैछ । यो बैंकले आइपीओकै मूल्यमा एफपीओ निश्कासन गर्न लागेको हो । एफपीओमा भदौ ३० गतेभित्र आवेदन दिइसक्नुुपर्नेछ । यो कम्पनीले एफपीओका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएदेखि...
दशैं बजेट जोगाउनू ! ग्रामीण बैंकको एफपीओमा लगानी गरे भइनेछ मालामाल
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा ७०० रुपैयाँ भन्दा बढीमा किनबेच भइरहेको नेपाल ग्रामीण विकास बैंकले आगामी भदौ २७ देखि ३० गतेसम्म साधारण सेयरको अतिरिक्त निश्कासन गर्दैछ । यो कम्पनीले एफपीओका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएदेखि नै चर्चा भइरहेको छ। चर्चाको एउटै कारण हो दोश्रो बजारमा ७ सय बढी मूल्यमा कारोबार भइरहेको सेयर एफपीओमार्फत प्रतिकित्ता...
ग्रामीण बैंकको एफपीओ भदौ २७ देखि, प्रतिकित्ता एकसय रुपैयाँमै पाइने
काठमाण्डौ । बहुप्रतिक्षित नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लिमीटेडले एकसय रुपैयाँ प्रतिकित्ताको दरले आगामी भदौ २७ गतेदेखि एफपीओ निश्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले शुक्रबार एक आह्वानपत्र प्रकाशित गर्दै भदौ २७ गतेदेखि ३० गतेसम्म एफपीओ खरीदका लागि आवेदन दिन सकिने जनाएको हो । यो अवधिसम्म माग अनुसारको आवेदन नपरे ढिलोमा असोज १० गतेभित्र आवेदन दिन...
आजदेखि ग्रामीण बैंकले आरएमडिसीको ८७.५ हजार संस्थापक सेयर बिक्री गर्दै
काठमाण्डौ । नेपाल ग्रामीण विकास बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर लिमीटेड(आरएमडिसी)को संस्थापक समूहतर्फको ८७ हजार ५ सय ६४.७४ कित्ता सेयर आज(भदौ १५ गते)देखि बोलकबोल प्रक्रियाबाट बिक्री खुलाएको छ । ग्रामीण बैंकले बजारमा अन्तिम कारोबार मूल्य प्रतिकित्ता ८ सय २ रुपैयाँ रहेको सेयरलाई न्यूनतम प्रति...
बिहीबारदेखि आरएमडिसीको ८७.५ हजार कित्ता सेयरको लिलामी, न्यूनतम मूल्य ४०१ रुपैयाँ
काठमाण्डौ । नेपाल ग्रामीण विकास बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर लिमीटेड(आरएमडिसी)को संस्थापक समूहतर्फको ८७ हजार ५ सय ६४.७४ कित्ता सेयर भोलि(भदौ १५ गते)देखि बोलकबोल प्रक्रियाबाट बिक्री गर्ने भएको छ । ग्रामीण बैंकले बजारमा अन्तिम कारोबार मूल्य प्रतिकित्ता ८ सय २ रुपैयाँ रहेको सेयरलाई न्यूनतम...